Kenya oo hakisay xiridda xeryaha Dhadhaab - BBC News Somali
Kenya oo hakisay xiridda xeryaha Dhadhaab
Image caption Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waa kuwa ugu weyn dunida.
- Bisha 1aad: Diiwaan galinta qaxootiga.
- Bisha2aad: Qaxootiga aan Soomaalida ahayn ayaa laga rarayaa xeryaha Dhadhaab, waxaana la gayanayaa xeryo kale oo Kenya ku yaalla.
- Bisha 3aad: Qaxootiga qaarkood waxaa loo wareejinayaa waddan seddexaad.
- Bisha 4aad iyo tan 5aad: dib u celinta qaxootiga harsan.
Wasiirka Kenya u qaabilsan arrimaha gudaha Joseph Nkaissery wuxuu intaa ku daray in dib u celinta tiro ku dhow 280,000 oo ah qaxooti ku jira xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn - Dhadhaab - ay sii socon doonto.
Wasiirka Arrimaha gudaha wuxuu beniyey eedeymo sheegaya in xukuumaddu ay ku khasbayso qaxootiga inay dib ugu laabataan dalkooda, wuxuuana ku tilmaamay eedeymahaas oo ka soo baxay kooxaha xuquuqda aadanaha inay yihiin 'dacaayad siyaasadeed'.